merolagani - माउन्टेन हाइड्रोको आईपिओ खुल्यो, कसले गर्न पाउँछ आवेदन ?
माउन्टेन हाइड्रोको आईपिओ खुल्यो, कसले गर्न पाउँछ आवेदन ?
माउन्टेन हाइड्रोले असार २२ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीयबासीका लागि साधारण सेयर (आईपिओ) निष्काशन गरेकाे छ । माउन्टेनले १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ५० हजार कित्ता आईपिओ निष्काशन गरेको हो ।
कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावीत स्थानीयबासीका लागि उक्त आइपिओ निष्काशन गरेकाे हो ।
जसमध्ये ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ५० हजार कित्ता पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाका लागि र ५ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख कित्ता आईपिओ पाँचथरका अन्य क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दालार्इ छुट्टाइएको छ ।
आइपिओको बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । जसमा न्युनतम ५० देखि अधिकतम ६००० हजार कित्तासम्म आवेदन गर्न पाइनेछ । असार २२ गतेदेखि खुलेको आईपिओमा छिटोमा साउन ४ र ढिलोमा भदौ २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने हुने बिक्री प्रवन्धकले जनाएको छ ।
पाँचथरको फिदिम गाविसमा रहेको २१.६ मेगावाटको यो आयोजनामा हेवा र फेमे खोलाको पानी प्रयोग गरिएको छ । आयोजना बनाउन करिब चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । २०७१ मा कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ ।
आयोजनामा ८० प्रतिशत संस्थापक र २० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी हुने छ । १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दा र १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
आईपिओबाट संकलन हुने रकम सिभिल तर्फ सुरुङको फिनिसिङ्ग, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक मेकानिकल उपकरण जडान र प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च गर्ने कम्पनीले जनाएको छ